Ukungeniswa Kwengane Ephikwe Nguyise Emndenini – The Ulwazi Programme
Ukungeniswa Kwengane Ephikwe Nguyise Emndenini
Ziningi izinto ezenziwayo emindenini uma kade kunokungezwane noma ukusolana ngesimo esithile. Kunesimo lapho kufanele umndeni uhlawulelane khona ngokusolana noma uhlabele amadlozi kushwelezwe ngokwenzekile noma okwenzeka. Lapha sibheka isimo lapho emndenini kusolwa umakoti ngokungaziphathi kahle kuze kuthiwe uthole engane ekungeyona eyasemzini aganele kuwo. Bese kuthi ngokuhamba kwesikhathi kubonakale ukuthe abantu benza iphutha ngalokho.
Kuyenzeka ezinye zalezimo zilungiswe bonke abantu abathintekayo besaphila kodwa futhi kuyenzeka oyedwa wabo kube sewadlula emhlabeni kungakhulunywanga noma wadlula emhlabeni esaphika ukuthi ingane akusiyo eyakhe nomakoti aze axoshwa emzini wakhe. Lesimo sokuphikwa kwengane kuyenzeka ukuthi senze umntwana abe namashwa noma esekhulile yena izinto zingamhambeli kahle abanye bakubo zibahambele kahle. Isimo esifana nalesi siyafihlwa emndenini umuntu aze akhule omunye uma engabanga nayo inhlanhla yokuhletshelwa ngabanye abantu ugcina engazange noma ezwe ngezangoma noma ngabantu ababonayo. Ngesinye isikhathi lowo mntwana owayekhishwe inyumbazane aphuphe uyise ongasekho exolisa ngalakho akwenza.
Yomibili imindeni kufanele ihlabe imbuzi ukushweleza emadlozini nokugeza lowomuntu okade bemthuka nokuthi kufanele kungeniswe ingane esibongweni sayo ngoba namadlozi awayazi ngenxa yokuthi ayizange yenzelwe isiko lasekhaya kubo. Uma benemfuyo bayayibamba imbuzi khona ekhaya bayihlabe kodwa uma ingekho kufanele izingane zendoda yekhaya kube yizo ezihlanganisa imali zimele uyise ongasekho emhlabeni. Lembuzi eyokuxolisa ngokwenzeka kuthi imbuzi yesibili yokungenisa umntwana ekhaya kufanele bayinike abantu abadala emndenini kube yibona abakhuluma namadlozi. Umama uyena owamukela imbuzi yokuxolisa ngokuthukwa kwakhe uma esaphila kodwa uma kuwukuthi akasekho naye emhlabeni eyodwa ezinganeni zakhe iyamumela yamkele lembuzi. Futhi kufanele bahambe bayoxolisa nasekhweni ngokuthuka indodakazi yabo. Ingane leyo eyenzelwa imbuzi kufanele ifakwe isiphandla sayo bese kuyaqhutshekwa kwenziwa namanye amasiko omndeni.
Ngesikhathi kuhlinzwa imbuzi kukhona indawo noma inyama edikizayo embuzini, ekuthiwa umdikizo iyasikwa ishiswe nempepho kuthiwa kudla abadala. Kuphinde kusikwe namanoni ngaphakathi esiswini senkukhu lawo manoni asesiswini senkukhu yiwo asikwayo ashiswe nempepho kunikwe abadala. Lowo owenzelwa umsebenzi ufaka isiphandla uma kungo wesifazane isiphandla sakomalume usifaka esandleni sesinxele, owesilisa yena usifaka esandleni sokudla.